बिहे पछी मात्रै महिलामा आउने यस्ता अनाैठा परिवर्तन र त्यसका कारणहरु ! । प्राय जसो बिहे पछी महिलाहरुको शारीरिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख सकिन्छ । साथै बिवाह पछी महिलाहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । सामान्य तय अन्य महिलाको तुलनामा विवाहित महिलाको हि`पको आकारमा धेरै परीवर्त भएको देख्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा सामान्यतय महिलाहरु सानै उमेरमा शारीरिक विकास नभएकै बेला बिवाह गर्छन त्यस कारणपनि बिहेपछी हिपको साइज बढ्नु अथवा ठुलो हुनु सामान्य…
November 13, 2020 November 13, 2020 chothale
गुल्मी : गुल्मीमा जीप दु’र्घटना हुँदा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ भने ७ जना घा’इते भएका छन्। गएराती जिल्लाको गुल्मीदरवार गाउँपालिका –२ मजुवाबाट हटियातर्फ जाँदै गरेको लु १ च ४७११ नम्बरको जीप दु’र्घटना हुँदा २४ वर्षका चालक खेम गाहा मगरको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरिक्षक प्रबीणलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार जीपमा सवार तीन जना ग’म्भीर घा’इते भएका छन् भने अन्य चार जनाको अवस्था सामान्य रहेको छ। घाइतेलाई थप उपचारका लागि पाल्पा प्रवासमास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पठाइएको छ। दु’र्घटनामा परेको जीप सडकबाट करिब ३ सय मिटर तल…
हाम्रो समुदायमा धेरै जातजाति धर्म कर्ममा बिश्वास गर्ने समुदाय मानिसहरु मिलेर बस्छन । ४ बर्ण ३६ जातको सुन्दर फुलबारी पनि हो । आज हामी त्यही भित्र पर्ने एक जना नेपाली चेली जो घास काटेर चेपाङ समुदायाबट पहिलो पटक नर्स बनेकी छिन उनैको बारेमा चर्चा गर्नेछौ । घास काटेर नर्स बनेकी सरिता चेपाङ को कथा धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर १, लैताककी सरिता चेपाङ २० वर्षकी भइन्। गाउँमा उनका उमेरका चेपाङ युवती सबैले बिहे गरिसके। उनीसँगै स्कुल पढ्ने ती साथीहरूले एसएलसी तहको अध्ययन पनि पूरा गरेनन्। तर सरिता गाउँमै पहिलो…
तसलिमा नसरिन- मयमनसिंहमा प्राइभेट कोठा नपाइए पनि ढाकामा पाइन्छ भनेर रुद्र भनिरहन्थ्यो　। तर, म कसरी ढाका जान सक्थेँ र ! रेलमा चढेर एक्लै जान त सक्थेँ होला, तर घरबाट अनुमति देलान् र ! अन्त्यमा सान्दाइ मयमनसिंह आएका वेला ढाका जान जिद्दी गरेँ　। ‘पहिलो वर्षको जाँच पास गरेको प्रमाणपत्र लिन ढाका जान्छु,’ भनेँ　। ढाका पुग्नेबित्तिकै ‘एकजना साथीलाई ढाका विश्वविद्यालयको होस्टेलमा भेट्न जान्छु’ भन्दै सान्दाइको कोठाबाट हिँडेँ　। र, सीधै रुद्रको कोठा गएँ। तर, रुद्र खुसी भएन। खुसीमा उफ्रिनु वा पीडामा आँसु झार्नु रुद्रका लागि असम्भवप्रायः थियो । शिरदेखि पाउसम्म ऊ रूखको ठुटोजस्तै…